Sainte – Marie- Vono lona : “Chef d’agence” na banky nosamborina sy hanaovana fanadihadiana (Midi-Madagascar) | AEMW
Sainte – Marie- Vono lona : “Chef d’agence” na banky nosamborina sy hanaovana fanadihadiana (Midi-Madagascar)
Tompon’andraikitra iray eo anivona banky ao Sainte Marie no nosamborina sy anaovan’ny mpitandro filaminana fanadihadiana, mikasika ny famonoana ireo teratany frantsay roa, noho izy ity tena mpinamana akaiky tamin’ity teratany frantsay ahiahiana voalohany tamin’ny famonoana an’i Romain sy Magalie. Ao anatin’izay koa anefa dia mampiaka-peo ireo fianakavian’izy efatra mianadahy voarohirohy tamin’ity raharaha ity, fa nosamborina tsy misy porofo ny havan’izy ireo.
Zon’ny fiarovana. Miakatra ny feo amin’ireo fianakavian’ireto voarohirohy ankehitriny. Amin’izy ireo dia tsy misy fanajana mihitsy ny zon’ny fiarovana sy zon’olombelona ho an’’ireo Malagasy nosamborina ireo. Araka ny baikon’ny fampanoavana Toamasina dia tsy afaka mifandray sy miresaka amin’ny fianakaviany mamangy azy izy ireo. Ilay teratany frantsay heverin’ny maro ho tena tompo-marika tamin’ity vono olona tamina Frantsay tahaka azy ity anefa dia afaka mifandray tsara amin’ireo namany mamangy azy isan’andro. “Tsy mpamono olona ny zanakay, tondro motolotra fotsiny dia tafidi-kizo lalina izy ireo”, hoy ny fanazavan’ireto fianakavian’ny voarohirohy ireto. Voalazan’izy ireo hatrany fa ny heloka anenjehana ny zanak’izy ireo dia noho izy ireo nivoaka nanao andiany namonjy fodiana taorian’ireto teratany frantsay maty ireto.
Fidinana an-dalam-be. Miova be ny fandehan’ny raharaha any Sainte-Marie ankehitriny mikasika ny fizotry ny fanadihadiana. Tsy ireto fianakaviana ireto ihany no nilaza izany, fa ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana ihany koa mahita ny fiovan’ny fizotry ny raharaha. Raha ny zava-misy, raha natao totoafo ny fanadihadiana satria teratany frantsay ireto nisy namono, dia mihazohazo izany ankehitriny satria teratany frantsay sakaizan’ilay tovovavy maty no loha-lisitra tamin’izao vona olona izao. Milaza ny hidina an-dalam-be ny mponina ao Sainte-Marie raha misy ny fanafahana ity Frantsay ity, sy ny fampidirana am-ponja ny zanak’izy ireo amin’ny zavatra tsy nataony.
Ankoatra izany, dia fantatra ihany koa, araka ny loharanom-baovao marim-pototra fa nandritra ny fisavana ny tranon’ity Frantsay tena ahiana tamin’ny famonoana an’i Romain sy Magalie ity, dia nahatrarana fonosana rongona maromaro tao aminy. Nefa araka io loharanom-baovao io hatrany dia ninian’ny mpanao fanadihadiana nampanginina izany, na dia heloka eto amintsika.
The post Sainte – Marie- Vono lona : “Chef d’agence” na banky nosamborina sy hanaovana fanadihadiana appeared first on Midi Madagasikara.
@dmin August 30, 2016 Midi-Madagascar No Comments
← Des sommets qui ne pourront pas avoir lieu (Midi-Madagascar)
Art & déco : taozavatra sady fihariana ny taovy (NewsMada) →